ကြှနျုပျတို့အကွောငျး | ဂျိမ်း Quek & MYHELPER PTE LTD အကြောင်းကပို
ကျွန်ုပ်တို့၏ Advocacy မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး
ကျွန်တော်တို့၏ 100% ပိုက်ဆံသို့ပြန်သွားရန်အာမခံ
ဂျိမ်း Quek ယခင်က World Vision ၏စင်္ကာပူ၏အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာခဲ့, နိုင်ငံတကာခရစ်ယာန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအဖှဲ့အစညျး. World Vision မှစင်္ကာပူတွင်ရေရှည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးပရောဂျက်များရှိပါတယ် 16 အဆိုပါစီမံကိန်းများအားမိမိခရီးသွားမှတ်တမ်း countries.In, သူမိန်းမတို့သည်မိသားစုစောင့်ရှောက်တာအတွက်စံဆောငျသူမြားကွညျမွငျ. အမှုအရာ untenable ဖြစ်လာခဲ့သည်လိုက်တဲ့အခါ, များစွာသောရေခြားမြေခြားအိမ်ဖော်ဖြစ်လာသို့မဟုတ်မိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့ရေခြားမြေခြားအိမ်ဖော်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့သူတို့သမီးပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ပူဇော်သောယဇ်ဖြစ်စေခြင်းငှါခဲ့. များစွာသောသာဓကခုနှစ်တွင်သူတို့ကအမြတ်ထုတ်၏သားကောင်များနှင့်လူကုန်ကူးမှုကွင်းဖြစ်ခြင်းအန္တာရာယ်. ဂျိမ်း Quek စင်္ကာပူမှာအလုပ်အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေရေးအတွက်၎င်းတို့၏နေအိမ်များများ၏လုံခြုံမှုနှင့်နှစ်သိမ့်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသောဤသူ Hardy မိန်းမတို့အဘို့အသက်တာကိုအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်ရန်မျှော်လင့်.
အဆိုပါအိမ်ဖော်စက်မှုလုပ်ငန်းစျေးကွက်တပ်ဖွဲ့များကထက်စျေးကွက်အလေ့အကျင့်အားဖြင့်ပိုပြီးမောင်းနှင်နေသည်. ဤသည်အလုပ်ရှင်နှင့်အိမ်ဖော်များအတွက်စနစ်တကျပြဿနာများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်. အိမ်ဖော်အကြွေးတွေ၏ပုံနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်အနေဖြင့်အလုပ်ရှင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ချို့တဲ့ရှာပါ။
MYHELPER အိမ်ဖော်ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်၌အဖိုးတန်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်နေ. သူတို့ကမိခင်များပင်ဖြစ်ကြကုန်၏, အစ်မတွေ, သမီး. အခွအေနအားဖြင့် Driven, သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုများအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကို၏ search အတွက်စင်္ကာပူတွင်အလုပ်လုပ်ရန်၎င်းတို့၏နေအိမ်များ၏နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုတက်ပေးပြီ. အဆိုပါကုမ္ပဏီရှာကြံ:
•ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်တရားမျှတမှုအိမ်ဖော်နှင့်စိတ်အလုပ်ရှင်များ '' ငြိမ်းချမ်းရေးများအတွက်ပရီမီယံဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်အိမ်ဖော်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဘုရားရေးရာဖြောင့်မတ်ဆီသို့ဦးတည်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ခြင်းငှါ၎င်း, နှင့်
MYHELPER PTE LTD အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများစင်္ကာပူ (AEAS) ၏အသင်းမှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ AEAS အားဖြင့်ချမှတ်ထားအဖြစ် MYHELPER PTE LTD ကျင့်ဝတ်များ Code ကိုစာရင်းပေးသွင်း. MYHELPER PTE LTD အလုပ်ရှင်များနှင့်အိမ်ဖော်မှကျွမ်းကျင်ပိုင်နှင့်တာဝန်ခံ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိအပြည့်အဝတာဝန်ယူဖြစ်ပါသည်.
MyHelper မှတ်ပုံတင်လူမှုရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး. ကျနော်တို့လူမှုလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည်စင်္ကာပူစင်တာတစ်ခုအသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း. ကျနော်တို့လူမှုရေးကောင်းသောအောင်မြင်ရန်ရှာကြံသည်ဟုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း, ဤကိစ္စတွင်အတွက်အိမ်ဖော်များ၏သက်သာချောင်ချိရေး.
ကျင့်ဝတ်များ Code ကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များဝတ်ပြုရမည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးနိုင်ငံခြားအိမ်ဖော် (FDW) ၏အလုပ်ရှင်များ. ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်နှငျ့ ပတျသကျ. ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ client များအကြားဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုတွင်ဖော်ပြထားအားလုံးစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်:
ii. အိမ်ရှင်မိသားစုများအတွက်သင့်တော်ပါလိမ့်တွေ့ရှိသူတစ်ဦး FDW ၏အစားထိုး.
iii. တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်အချိန်အတွင်းတွင်တူညီသော FDW များအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်း.
2. client လျှို့ဝှက်
ကျနော်တို့လုပ်ငန်းသင်တန်းအတွက်ဝယ်ယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များနှင့် ပတ်သက်. တတိယပါတီသတင်းအချက်အလက်မှခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတင်ထားရမည်မဟုတ်.
3. နိုင်ငံခြားရေးပြည်တွင်းလုပ်သားများ (FDW)
ကျနော်တို့အကောင့်သို့နှစ်ဖက်စလုံး၏အကျိုးစီးပွားယူပြီးရေးသားထားသောအလုပ်အကိုင်စာချုပ်ပေးခွငျးအားဖွငျ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုနှင့် FDW ၏ယှဉ်ပြိုင်အကျိုးစီးပွားချိန်ခွင်လျှာညှိရကြလိမ့်မည်
5. MOM စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်စည်းမျဉ်း
ကျနော်တို့ကို advertise လိုက်တဲ့အခါ, ကျနော်တို့က dictum "ဟုအဆိုပါအကောင်းဆုံးမူဝါဒအတွက်ရိုးသားမှု" ၏အောကျမေ့ရကြလိမ့်မည်နှင့်ကျွန်တော်ကြော်ငြာအတွက်အမှန်တရား၏နိယာမစာရင်းသွင်းရမည်
တစ်ဦး. ကျနော်တို့ကို advertise အဘယ်အရာကိုအစဉ်အမြဲကိုဂုဏ်ပြုတဲ့.
ခ. ငါးစာနှင့် switch ကိုနည်းဗျူဟာမှရှောင်ကြဉ်.
ကျနော်တို့ရကြမည်, ခပ်သိမ်းသောကာလ, အသက်ရှင်သောသတ္တဝါအဘို့အလုပ်ကိုင်ဖို့ကဒီမှာသူ FDW ၏ခံစားခကျြမှအထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်ရိုသေလေးစားမှုဖြစ်. ကျနော်တို့ထိုးစစ်အောင်မှရှောင်ကြဉ်ရကြလိမ့်မည်, စော်ကားချက်ပါသော, လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းနှင့်အရှက်သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်ညွှန်းဆိုသည့် FDW နှင့်အရင်းအမြစ်နိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံရသောအခါ.
အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများ၏အသင်း (စင်္ကာပူ) ၏တစ်ဦးအသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်း, ကျွန်တော်အလေ့အကျင့်များက၎င်း၏ Code ကိုအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်နေကြသည်နှင့် Code ကို၏စည်းကမ်းချက်များလိုက်နာရကြလိမ့်မည်. ကျနော်တို့တောင်းဆိုမှုကိုပေါ်မှာငါတို့ဖောက်သည်အလေ့အကျင့်များကျင့်ထုံးရရှိနိုင်စေမည်.
MYHELPER PTE LTD @ reserved အားလုံးအခွင့်အရေးများ.